Terminal နှင့်အတူ - wget နှင့်တန်းစီလင့်ခ်များစွာကို download လုပ်ပါ။ | Linux မှ
Terminal နှင့်အတူ - wget နှင့်တန်းစီလင့်ခ်များစွာကို download လုပ်ပါ။
nano | | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုမှလင့်ခ်များစွာကိုအကြိမ်များစွာ download လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ မည်သည့် link များမဆိုကျွန်ုပ်တို့တွင်၎င်းအတွက်လုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်၊ လက်တွေ့ကျပြီးအခြားသူများမှာမူဥပမာ -
မန်နေဂျာမှကူးယူပါ Firefox ကို ၎င်းသည်အတော်လေးလက်တွေ့ကျသောကြောင့်၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော်လည်းသင်က၎င်းကိုအကွက်ထဲသို့အနိမ့်အမြင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကောင်းသောအရာသင်ပိတ်လိုက်လျှင် Firefox ကို ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာသည်အတူတူအလုပ်လုပ်သည်။
con ခရိုမီယမ် ကွဲပြားခြားနားသည်၊ မန်နေဂျာသည်အလွန်ထူးဆန်းသည်၊ သမ္မာတရားမှာဘရောင်ဇာကိုသင်မပိတ်နိုင်။ အရင်းအမြစ်များကိုလောင်ကျွမ်းသောကြောင့်၎င်းသည်အသုံးနည်းသည်။
တူအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် သပိတ်မှောက် y Jdownloader ပါဒါပေမယ့်ငါဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူး Jdownloader ပါ ဂျာဗားကိုသုံးသည်ငါမုန်းတဲ့အရာအားလုံးနဲ့ java ကိုမုန်းတယ်) ပြီးသား သပိတ်မှောက် ငါဘယ်တော့မှအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ Jdownloader ပါ.
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်ရန်အကြိမ်များစွာ Link တွင်ထည့်သွင်းထားသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအလင်းနှင့်ကျူးကျော် ၀ င်ရောက်မှုမရှိသောနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အပေါ်ဘက်မှ windows များနှင့်တူသည်။ ကောင်းပြီဖြေရှင်းချက်, အစဉ်မပြတ်သကဲ့သို့, အားလုံးအစွမ်းထက်၌တည်ရှိ၏ ဂိတ်.
သင်မှတ်မိပါသလား wget? ကောင်းပြီ၊ စာမျက်နှာတစ်ခုမှတစ်ခုခုကိုယခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်း၊ အချိတ်အဆက်များစွာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းမှတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအဆက်ပြတ်ခြင်းနှင့်ပြိုလဲလျှင် connection ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းတို့ဖြင့်များစွာလုပ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်ဘုံနှင့်ရိုးရိုးစာသားတည်းဖြတ်သူ (terminal) ဖြစ်နိုင်သည် guake, jterm သို့မဟုတ် yakuake) နှင့်နည်းနည်းသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာကိုကူးယူလိုသောနေရာမှ link များကိုအတိအကျရှာဖွေလိမ့်မည်။
တည်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည် text editor ရှိ link တစ်ခုချင်းစီကိုကော်ပီကူးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုင်များကို .txt တွင်သိမ်းဆည်းပြီးဖိုင်များကို download ပြုလုပ်လိုသည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့အားအမိန့်ပေးရပါမည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည် terminal မှဖိုင်များကိုကူးယူချင်သောဖိုင်တွဲသို့သွားပါမည်။
wget -c -i archivo.txt
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ၊ ဒီရိုးရှင်းတဲ့ command line နဲ့သူတို့မှာ Jdownloader လိုကြီးမားတဲ့ပရိုဂရမ်များကသူတို့ကိုပေးလိမ့်မယ်လို့သူတို့မထင်ခဲ့ကြဘူးလား။ ဒါပေမယ့်ငါနေဆဲအရာတစ်ခုချင်းစီကိုအဘယ်သို့ပြုသည်ကိုရှင်းပြ:
wget သည် link များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
-c သည် download လုပ်ခြင်းပြတ်တောက်လျှင်ဆက်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Terminal နှင့်အတူ - wget နှင့်တန်းစီလင့်ခ်များစွာကို download လုပ်ပါ။
ငါစိတ်ကူးမရှိပါ, တစ်နေ့အကြာကဒီ ajhahaha အကြောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
၎င်းသည်အလွန်အသုံး ၀ င်သည်၊ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏ဆာဗာတွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်
JDownloader ဖြင့် MediaFire မှကျွန်ုပ် download လုပ်သည်။ ဒါနဲ့ငါလုပ်နိုင်သလား
ဟုတ်တယ်။ သင်သည်တိုက်ရိုက်လင့်ခ်ကိုသာရှာဖွေရန်လိုအပ်သည် (download ခလုတ်ပေါ်တွင်ညာဘက်ကလစ်နှိပ်ပါ> လိပ်စာကူးရန်) ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လင့်ခ်များကို သုံး၍ မရပါ http://www.asdf.com/montondeletrasynumeros သူတို့ဖိုင်အမည်နှင့်အဆုံးသတ်မဟုတ်လျှင်။ ဥပမာ, http://www.asdf.com/loquesea/descarga/archivo.zip.
အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ငါ Plowshare ကိုသုံးတယ်
Rapidshare, Fileserve နှင့်အခြားဖိုင်ဝေမျှသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှဖိုင်များကိုကူးယူပါ
မှတ်ချက် - Plowshare သည် Java virtual machine သို့မဟုတ် graphical interface သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာမျှမလိုအပ်ပါ။ Wget နဲ့ဆင်တူတယ်။
အလွန်အသုံးဝင်ပြီး anime ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အလွန်ကောင်းသည်။ အထူးသဖြင့် Jdownloader ဘယ်လောက်လေးတယ်ဆိုတာနဲ့ပါ။
Jamin samuel ဟုသူကပြောသည်
Jamin Samuel ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ့ညီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်😉 .. ငါ Jdowloader ကလွဲပြီး xD xd ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်။ ငါဘယ်လိုစမ်းသပ်နေလဲဆိုတာငါကြည့်မယ်။
အိုကေ .. အကူအညီအနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်
ကျွန်တော် terminal ကိုဖွင့်ပြီးနေရာချလိုက်တယ်
ငါနာမည်ကိုရေးဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ "ကိုယ်ပိုင်ဖိုလ်ဒါ" ကိုရေးဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ငါ "downloads" ကိုရေးဖို့ကြိုးစားတယ်၊ အဲဒီမှာစာသားဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လင့်များနှင့်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ..
နိဂုံးငါဖိုလ်ဒါမှတဆင့် terminal ကိုနှင့်အတူသွားလာရန်မည်သို့မည်ပုံမသိရပါဘူး ..
သူတို့ကငါ့ကိုသင်ပေး? pliss xD
command သည် cd / home / your-user / downloads ဖြစ်သည်
နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်အလက်တစ်ခုမှာ terminal ရှိအမည်များသည်လမ်းညွှန်တွင်သူတို့၌ရှိသည်နှင့်တူသည်။ "downloads" သည် "Downloads" နှင့်မတူ၊ "Videos" သည် "Videos" နှင့်မတူပါ။
+1 သို့ဆိုလျှင် "ငါဟာ Java ကိုငါ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေနဲ့မုန်းတယ်"
ကျွန်ုပ်၏ touchan အတွက်ပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည်၊ သို့သော်ယခုတွင်ငါသည်တိုက်ရိုက် download ထက် torrent ပိုမိုအသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဤမူကွဲကို -bci parameters ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နောက်ခံတာဝန်တစ်ခုအနေနှင့်ကျရှုံးမှုများရှိပါကပြန်လည်စတင်နိုင်ရန်၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုလမ်းကြောင်းညွှန်းကိန်းများအနည်းငယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ် download လုပ်သောတစ်ချိန်တည်းတွင် link ၏ link နှင့်သွားလာနိုင်သည်။
sudo trickled -d 10 -u 8 -t2-N6&& cd /var/tmp && trickle wget -bci pendiente && tail -f wget-log
၎င်းသည် Linux ကိုကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထူးဆန်းတဲ့ command, ငါက pry စတင်ပါလိမ့်မယ်။ အိုအို
ငါဒါကိုသိပ်နားမလည်ဘူး။ ငါ wget ကိုသုံးတိုင်း Html extension နဲ့ဖိုင်တွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်တယ်။ သူတို့ကဘာမှမအလေးထားဘူး၊
link ကိုကူးယူပြီး wget ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် terminal ထဲတွင် paste လုပ်ရန်သာဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာသိပ်မရှိလှပါ။
OpenSUSE တွင်ထည့်ပြီးသားဖြစ်သည်၊ သင်၏ distro ကို package manager တွင်သာစစ်ဆေးပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒါကိုအရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်
mmm haha ​​ငါနည်းနည်းဟောင်းသွားပြီဒါပေမယ့် ... ငါညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပေမယ့်ငါ့ကို download လုပ်တဲ့တစ်ခုတည်းသော html ...
Plowshare ကအရမ်းကောင်းတယ် Ubuntu မှာ install လုပ်ဖို့အရမ်းလွယ်တယ်။ Depositfiles, zshare, mediafire နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သူဟာ Mega နဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးဒါပေမယ့်အချိန်ကောင်းတစ်ခုပါ
Android အတွက် Ubuntu One Files သည် Instagram ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်
Ubuntu 12.10 ကို Quantal Quetzal ဟုခေါ်တွင်လိမ့်မည်